Ahoana no fomba fanaovana traikefa eo amin'ny sehatry ny fandraharahana amin'ny fomba mahitsy | Save A Train
Home > Travel Europe > Ahoana no fomba fanaovana traikefa eo amin'ny sehatry ny fandraharahana amin'ny fomba mahitsy
(Last Nohavaozina: 31/03/2021)
Ny fahasosorana sy ny singa mandany fotoana amin'ny laharana fizahana seranam-piaramanidina sy ny fitohanan'ny fifamoivoizana mankany amin'ny seranam-piaramanidina dia efa fantatry ny rehetra loatra raharaham-barotra mpandeha. Na inona na inona, raha Hianao no mitranga fohy Business nandeha lamasinina na misy intsony izay haka ora na andro maromaro, Train Business Travel Matetika no mora sy haingana kokoa noho ny hafa karazana mandeha. fa hafainganam-pandeha sy ny vola dia tsy ny tombony ihany ny rail Tsidika. Jereo ny tombony ambany.
Fikarohana dia maneho fa ny malaza indrindra raharaham-barotra-mifandray Travel fomba dia amin'ny alalan'ny fiaran-dalamby, manohitra rivotra sy ny karamany fiara Tsidika. Train Business Travel ny fomba fitaterana haingana indrindra fa ny antsasaky ny nandehanany (, indray mandeha fisidinana sy fotoana fahatongavan'ny rivotra dia nisaina) ary vidin'ny efa ho ny ampahadimin'ny vidiny ny manidina sy ny ampahatelon'ny mitondra fiara ny toerana halehany.
Business mpandeha ary ny mpividy fitsangatsanganana orinasa manana ny fotoana mety hampihena ny vidin'ny dia lavidavitra kokoa aza ary ny boky tapakila amin 'ny fomba izay mahatonga ny dia ho mety araka izay azo atao ny mpandeha. Andramo Online tapakila famandrihana fiaran-dalamby amin'ny SaveATrain sy ny fanaovana drafitra mialoha no fomba tsara indrindra mba hahazoana mahagaga efaha!
Ampitomboy ny fotoanao rehefa mitsangatsangana amin'ny asan'ny lamasinina:
Rehefa ianao mandeha lamasinina ianao, dia hanana ny safidy au livre ny latabatra seza mialoha izay midika fa afaka miasa foana ianao rehefa mandeha, maximizing ny fotoana avy ao amin'ny birao!
Jereo ny farany dalana vaovao -tserasera na hisoratra anarana ho fampahatsiahivana SMS. Ho nampahafantatra ny misy fahatarana na olana teny an-dalana alohan'ny nandaozany ny peo.
Ny sasany gara manolotra kilasy afera lounges izay laharam-pahamehana ny mpanjifa dia afaka miala voly sy fahafahana miditra Wifi sy miasa toerana. Tonga noho ny diany tany am-boalohany somary? Raiso manararaotra izany toerana izany hatao asa sasany atao dieny mbola miandry.
Cologne any Amsterdam Lamasinina
Ny dia an-dalamby dia afaka manolotra tombontsoa miorina amin'ny fotodrafitrasa maro ho azy raharaham-barotra mpandeha. Ohatra iray amin'izany Mety ho tafiditra in-toerana sy eo amin'ny fiaran-dalamby-Wi-Fi. Izany dia manome fahafahana mpandeha mba hijanona mifandray raha mbola eo ny hetsika. Nisy zavatra izay tsy azo atao raha mandeha amin'ny fiara.
Schiphol any London Lamasinina
Ny iray amin'ireo fomba tsara indrindra mba hanomboka ny lamasinina marina dia amin'ny alalan'ny raharaham-barotra mandeha ny lamasinina nividy tapakila amin'ny aterineto mampiasa Vonjeo-A-Train !
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy amin'ny toerana, dia tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftrain-business-travel%2F%0A%3Flang%3Dmg - (Ampidino nidina hamangy ny Embed Code)
#businesstravel #railwaystation longtrainjourneys Train Travel fiaran-dalamby nankany Travel traveltips